Ireo antony sy ny vokatry ny fanonganam-panjakana taty Madagasikara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Avrily 2009 11:41 GMT
Taorian'ny famindram-pahefana natao ny 17 martsa taty Madagasikara dia nihamafy hatrany ny korontana tao amin'ity nosy ity. 15 000 no isan'ny olona tsy nanaiky iny fanonganam-panjakana iny no nanamarika efa ho enina andro izao ary notifirin'ny miaramila tamin'ny baomba mandatsa-dranomaso efa ho 3 andro tsy an-kiato izao. Ny 28 martsa dia mpanao fihetsiketsehana tsy nanaiky ny fanonganana no voatifitry ny mpitandro ny filaminana ka naratra, 34 no isany ary vitsivitsy tsy tena fantatra isa no manampy azy ireo.
Stephen Ellis, mpiara-manoratra amin'i Solofo Randrianja ao amin'ny Madagascar: A short Story (Madagasikara: Tantara fohy), sady mpampianatra ao amin'ny anjerimanontolo tsy miankina iray any Amsterdam, no manazava ny anton'ny korontana aty Madagisakara:
Ny antony nahatonga ny tsy filaminana dia vokatry ny fahantrana be loatra etsy an-daniny (70% ny mponina no mahantra) sy ny fiterahana be loatra etsy an-kilany. Io nosy io mantsy no anisan'ny manana taham-pahaterahana be indrindra manerana ny tany (nitombo be ny isan'ny mponina: 3 tapitrisa ny taona 1900, 6 tapitrisa ny 1960 ary 20 tapitrisa izy ankehitriny). Ny fitomboan'isan'ny tanora isan-taona mitady asa no namorona rivotra iainana tsy tena madio loatra tao Antananarivo… Voafidy fanindroany indray Ravalomanana ny taona 2006. Kanefa na dia filoham-pirenena aza izy dia mbola nanohy nitady harena sy tombontsoa manokana ho azy ihany ary naneho tamin'ny fitantananay ny maha mpanao afera azy, ary tsy mahagaga raha nitarika ny fianjerany izany. Nanao fahotana mahafaty koa izy tamin'ny nifanarahany tamin'ny Koreana Tatsimo izay nitady hanao fitadiavam-bola amin'ny tany hambolena sakafo haondrana. Nitarika fahatahorana teo amin'ny olona izany, olona izay fantatra fa mifikitra mafy amin'ny tanin'ny razany.
Manazava ny fifandraisana nisy teo amin'ny fampanofana tany ny Daewoo, orinasa Koreana Tatsimo, sy ny korontana misy ankehitriny i Ethan Zuckerman:
Vao tsy ela akory izay dia nanao sonia fifanarahana fampanofana tany mandritra ny fotoana tsy voafetra, tany mirefy 3.2 tapitrisa metatra tora-droa ny Koreana ary hofana $12 ny metatra tora-droa amin'izany tany izany… Noeritreretin'ny Koreana hambolena katsaka haondrana any aminy ny ankamaroan'io tany io ary ny ambiny kosa hanaovana menaka palma haondrana amin'ny tsenan'ny bio-fuel (enerjia avy amin'ny zava-maniry). Fanomezana hafahafa izy ity satria mantsy i Madagasikara dia firenena mbola tsy mahavita tena ara-tsakafo, ary ambonin'izany rehetra izany dia fantatra fa tantsaha ny ankamaroan'ny mponina… Manoloana ny lafiny ekolojika ao amin'ny Nosy dia tahaka ny hoe ny tany tsy voakitika dia harena ho an'ny firenena mansritra ny fotoana ela.
Ny 17 martsa dia namindra ny fahefana tamin'ny miaramila ny filoha Ravalomanana ary ity fitondrana miaramila ity no hikarakara ny fitsapankevi-bahoaka. Tsy nanaiky izany fandaminana izany anefa ny mpanohitra ka nanome ny fahefana ho an'ny mpitarika azy ireo Rajoelina.
Manoloana ity famindrana fahefana ity dia manambara ny governemanta fa tsy fanonganam-panjakana mihitsy no nataony, izay tsy hiombonan'ny fikambanam-be iraisam-pirenena hevitra aminy. Nanambara tao ami'ny gazety Midi Madagasikara ny masoivohon'i Etazonia miasa eto Madagasikara fa vavomombelona nanatri-maso ny fampiasana hery nataon'ny miaramila sy ny fandrahonana natao izy nandritra ny fanonganam-panjakana:
Hitan'ny masoko hoe hatraiza ny fampiasana hery nataon'ny miaramila nandritra iny fanonganam-panjakana iny. Ary na dia izaho aza dia niharan'ny fandrahonana am-bava sy nambanana basy. Tsy azo ekena hoe miaramila an'ny governemanta iray no mandrahona ny masoivoho miasa eo amin'ny firenena.
Indro ny sary maneho ny zavatra notantarain'ny masoivohon'i Etazonia teo:
Andro vitsivitsy taty aoriana dia firenena maro no nampiato ny fanampiany an'i Madagasikara.
Tonga dia nisy fiantraikany teo amin'ny mpandraharaha malagasy ity fanapahan-kevitra hampijanona ny famatsiam-bola ity. Nanoratra tao amin'ny Facebook i Andriatefihasina Hary ary nomeny lohateny hoe: “Inona no hatahoranao manoloana ny fampihatoana ny fanampiana iraisam-pirenena?” (fr):
Ho ahy manokana dia olana goavana ny fampihatoana ny fanampiana avy any ivelany. Ohatra fotsiny izao ny hoe manana asa vatsian'ny banque mondiale vola izahay. Ary raha mitombina ny hoe handeha ry zareo dia voatery tsy maintsy horoahina ny mpiasa rehetra.
Ohatra iray amin'ireo marobe iny an'i Hary iny. Manazava ao amin'ny BBC i Eric Koller mpitantana toeram-pisakafoanana sy fandraisam-bahiny:
80% ny trano fandraisam-bahiny no mikatona ary mitondra ny mafy amin'izany ny any amin'ny faritany. Revkin, mpitoraka bilaogy ao amin'ny New York Times Dot Earth no manazava fa ny valan-javaboahary ao Marijejy, malaza amin'ny biby tsy fahita firy sady arovana, no rakotry ny trosa ankehitriny ary matahotra mafy ny mpitantana azy.
Ny 28 martsa no kihon-dalana vaovao lalovan'ny krizy eto Madagasikara.
Indro ny sary mampiseho ny fihetsiketsehana manohitra ny fanonganam-panjakana ary mampiseho ireo miaramila manaparitaka azy ireo amin'ny tifitra sady mampiasa baomba mandatsa-dranomaso(fr):
Ilay mpanao fihetsiketsehana antsoina hoe Razily, milanja ny sainam-pirenena Malagasy, no nomarihan'ireo mpitoraka bilaogy manokana. Nalaina sary izy raha iny izy irery iny nanantona ireo miaramila, bala maro no nipoaka manodidina azy, mandrapanosiky ny miaramila azy tao anaty fiarabe. Naseho tao amin'ny New York Post koa ity sarin-dRazily ity:
Razily manoloana ireo pôlisy ny 28 martsa (via topmada.com)
Maro tamin'ireo mpanoratra twitter no nilaza fa be herim-po Razily.
Mpanao fihetsiketsehana be herim-po nosamborin'ny miaramila
Nanoratra i TJ ary nilaza fa ny sary mihetsika no mahazatra rehefa tahaka itony:
Sary mihetsika avy any Madagasikara: lehilahy anakiray milanja sainam-pirenena Malagasy nosamborin'ny miaramila, mampahatsiahy ny zava-nisy tany amin'ny kianja Tiananmen.
Manampy izany i Aliosty:
Ity “Tiananmen” taty Madagasikara ity dia manamarika ny fanjakana vaovaon'i TGV. “
Manoloana ny zava-niseho nandritra ny 2 andro lasa izay dia tsapa fa mihamalefaka ny fifandirana aty Madagasikara. Milaza ny The economists fa miorina sady marefo ny governemanta vaovao.
Hamaranana azy, raha hitodihantsika kely ny niatombohan'ny krizy dia milaza i Alex Evan ao amin'ny bilaoginy Global Dashboard fa mody tsy mahalala ny tantara ny Koreana Tatsimo: mampiseho sary sangisangy zary tenany ny gazety lehibe iray any an-toerana, ny Chosun Ilbo, sary maneho endrika mainty iray voadaroka amin'ny hazo tampoka manenjika Koreana miasa tany.